विदेशमा नेपालीका शव अलपत्र? – Tourism News Portal of Nepal
विदेशमा नेपालीका शव अलपत्र?
१४ साउन, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा असारमा मात्र २३ लास विदेशबाट मगाइदिन निवेदन परेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी साउदी अरेबियाको रियादबाट ११ लास ल्याइदिन आफन्तले निवेदन दिएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
असारमा मात्रै २३ शव ल्याउन निवेदन
६६ जना अलपत्र
शव ल्याउन पाँच लाख
मध्यपूर्वबाट नेपालीको शव ल्याउन कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ लाग्छ। कानुनी रूपमा गएकाहरूको हकमा सम्बन्धित कम्पनीले नै खर्च व्यहोर्छ। गैरकानुनी रूपमा जानेले भने शव आफैँ ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सहयोग गर्छ।‘एयर कार्गोबाट शव ल्याउनुपर्छ, जीवित मानिसभन्दा पाँच गुनाभन्दा बढी पैसा शव ल्याउन लाग्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने।